बबरमहलस्थित निवासमै भयो पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या, कसरी घट्यो घटना ? — Sanchar Kendra
१भारत, बेलायत र अमेरिकामा राजदूत सिफारिस, नामलिस्टसहित
बबरमहलस्थित निवासमै भयो पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या, कसरी घट्यो घटना ?
पूर्वराजदूत केशव झाको हत्या भएको छ । ८० वर्षीय झा बबरमहलस्थित आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए ।
प्रहरी अहिले घटनास्थलमा छ । प्रहरीका अनुसार उनको टाउको र घाँटीमा चोट लागेको छ । भान्साको चक्कु प्रहार गरी उनको हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ ।
घरमा झा, उनकी श्रीमती र सुरक्षागार्ड सानु तामाङ मात्र थिए । छोरा बुहारी शनिबार मात्र आयरल्याण्ड गएका थिए भने छोरी पनि घरमा थिइनन् ।
घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी बसन्त लामाले जानकारी दिए । परराष्ट्र सेवामा ३४ वर्ष विताएका झा फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्व राजदूत हुन् ।
प्रहरीले अहिले मृतककी श्रीमती र सुरक्षागार्डसँग सोधपुछ गरिरहेको छ । घटनाको अनुसन्धानका लागि चिकित्सक र तालिम प्राप्त कुकर बोलाउने तयारी छ । घटना कसरी घट्यो भन्नेबारेमा थप अनुसन्धानपछि मात्रै केहि भन्न सकिने एसएसपी लामाले बताए ।
२०७५ भदौ ४ मा प्रकाशित ।